Maaddooyinka gaarka ah ama aagagga dalabku waxay u baahan yihiin farsamo gaar ah.
Qulqulka la isticmaalay inta lagu gudajiro geedi socodka indha indheynta caadiga ah ayaa badanaa sabab u noqda daxalka iyo gubashada goobta shaqada. Ka mid noqoshada qulqulka ayaa sidoo kale horseedi kara naafonimo waxyaabaha ka kooban qaybaha. Intaas waxaa sii dheer, iyadoo ay ugu wacan tahay oksijiinka jira ee jawiga midabbada shaqada ee goobta shaqada.
Dhibaatooyinkan waa la iska ilaalin karaa marka la hoos jilayo gaaska aan shaqeynin ama faakiyuumka. Habka gaaska aan firfircooneyn ayaa si wanaagsan loola wadaagi karaa kuleylka kuleylka ah maadaama uusan jirin olol furan inta lagu gudajiro indha indheynta ku jirta gaaska difaaca iyo xaaladaha la xiriira socodka si wanaagsan ayaa loo xakameyn karaa.
Categories Technologies Tags adkeysi, gaaska soo noqnoqda ee brazing, gaaska induction indha indheynta, kuleyliyaha kuleylka kuleylka ah ee induction, kuleylka kuleylka kuleylka ah ee kuleylka ah, dhalaalida gaaska aan shaqeynin, soosaarida gaaska dareeraha ah, gaas inert, gaaska aan firfircooneyn, habka gaaska gaaska, kuleylka kuleylka ah, kuleyliyaha kuleylka kuleylka ah, kuleylka kuleylka kuleylka ah, gaaska aan shaqeynin Post navigation